Home News Former Telecel boss demands $1 million golden handshake
FORMER Telecel Zimbabwe chief executive officer Francis Mawindi has challenged his dismissal and is demanding over $1 million in damages or reinstatement as details emerge that he was fired, NewsDay has established.
Previous articleFreedom is coming!
Next articleTobacco generates $527m
Chitova June 6, 2013 At 6:01 am
Vamwe vari kutambira hama dzangu. $20 000. Kuzoti Obert Mpofu ari kudya zvakadini paChiadzwa apa? Anyway, his days are now numbered pamwe neTeam yake yose. Handei tose tinovhota pamwe tingazotambiravo ma$20 000 iwaya.